Tarsan oo wax laga xumaado ku tilmaamay hadalo kasoo yeerayay Saraakiisha amaanka Dowlada « BredaNews
Tarsan oo wax laga xumaado ku tilmaamay hadalo kasoo yeerayay Saraakiisha amaanka Dowlada
266 Views Date February 19th, 2014 time 10:30 am
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalo maalmahan kasoo yeerayay saraakiisha amaanka Dowlada Soomaaliya .
Tarsan ayaa sheegay in wada shaqeyn la’aan ka dhax jirta Saldhigyada Booliiska iyo Maamulada Degmooyinka ay sabab u tahay in ay Muqdisho ku kordhaan qaraxyada , Dilalka iyo weerarada ay geestaan Dagaalyahanada AL-Shabaab.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in wax laga xumaado tahay hadalada kasoo yeerayay saraakiisha amaanka ee ku aadanaa qaraxyada Muqdisho ka dhaca in ay yihiin kuwa dheemish ah oon waxyeelo dadka u geesaneyn.
” Waan maqlayay hadalada Saraakiisha amaanka ee ku aadan Waxa Muqdisgo ka dhacaya in ay dheemis yihiin , Ninka Baaruuda Dheemishka ridaya ee Shacabka Qal qalka galinaya wuu awoodaa in uu bambo tuuro ama qof dilo , maahan in la yiraahdo wax dhacay Hoobiye maahan ee waa dheemish aan qof dileyn , yaan lagu mashquulin arimahasai ee wax qabad ayaa la rabaa , maala qabto oo la ciqaabo kan baaruuda ridaya ” ayuu yiri Gudoomiye Tarsan.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay in Amaanka Magaalada Muqdisho uu hagaagayo hadii ay wada shaqeyn yeeshaan Gudoomiyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo Taliyaasha Booliiska oo kaa shanaya shacabka degmooyinkooda dagan.
Tarsan ayaa wax aan la qaadan karin ku tilmaamay in Gudoomiyaasha Degmooyinka Qaarkood aysan Degmadooda dagneen Degmadooda, waxa uuna sheegay in Gudoomiye kasta laga doonayo in Degmadiisa uu ka war qabo .
Hadalka Tarsan kasoo yeeray ayaa imaanaya xili ay korortay amaan darada Magaalada Muqdisho oo habeenadii lasoo dhaafayay ka dhacayeen weeraro iyo qaraxyo inta badan lagu eedeeyo in ay ka Dambeeyaan Al-Shabaab.